ပရင့်ထုတ်ရန်အ Card ကို Inkjet ပရင်တာတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ပလပ်စတစ်ကဒ်, Inkjet Printer တိုက်ရိုက် Print ကို PVC အဖြူရောင်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အသံလိုက်မြှောင်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ RFID Chip Blank ကကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ RFID ပလတ်စတစ်ကဒ်, RFID Inkjet Printer ပုံနှိပ်ပလပ်စတစ်ကဒ်, RFID Printable ပလပ်စတစ်ကတ်, RFID Printable Plastic White Card
ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်များ: အရွယ်အစားနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ, အထူ, ပုံသဏ္ဌာန်, အဆက်အသွယ် / အဆက်အသွယ်မရှိသော IC ချစ်ပ်အထုပ်, သံလိုက် strips တွေ, မျက်နှာပြင် Pre- ပုံနှိပ်ခြင်းဘောင် / လိုဂို / ပုံစံ, လေဆာနံပါတ်, ဒေတာရေးသားခြင်း, နှင့်အခြားအထူးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များ.
Epson inkjet ပရင်တာ R270 R230 R290 T50 L800 တိုက်ရိုက် Inkjet ပုံနှိပ် PVC အဖြူကဒ် / သံလိုက်ချွတ်ကဒ် / RFID ချစ်ပ်ကဒ်
ပစ္စည်း: အဖြူ PVC
အရွယ်: 86× 54mm
အဆိုပါလမိုင်းမပါဘဲ, shape at one times
230PC များ / စက္ဏူထူ, 1.35KG အလေးချိန်
အဆိုပါသင့်လျော် inkjet ပရင်တာမော်ဒယ်:
HiTi ID ကိုကတ်ပရင်တာ
Epson ပရင်တာ: R260, R265, R270, R280, R290, R330
Epson မော်ဒယ်များ: T50, T60, A50, P50, R210, R230
Canon ၏မော်ဒယ်များ: iP4600, 4680, 4700
Canon ၏ပရင်တာ: MP630, 640, 980, 990
အသုံးပြုမှု Method ကို:
ဗန်း၏အသုံးပြုမှုကို supporting. ကဒ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူ ID ကိုကဒ် inkjet ပရင်တာ, အသုံးပြုမှုကိုခြောက်သွေ့ပြီးနောက်.
"ထိုခဏခြင်းတွင်ကဒ်သို့ inkjet" စိတ်ကြိုက်ကဒ်လုပ်, ပုံတူကဒ်, IC ကဒ်, သံလိုက်ချွတ်ကဒ်တစ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုများဖြစ်ပါသည်, အလွှာပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ, ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ကိုဖုံးလွှမ်းစရာမလိုဘဲ, ရုပ်ရှင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းမရှိဘဲ, လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများအပြီးသတ်ဖို့အိုင်ဒီကဒ် inkjet ပရင်တာကို အသုံးပြု..
ဘုံစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်နဲ့တူလွယ်ကူသောလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများဖြစ်စဉ်ကို, ကုန်ကျစရိတ်အောက်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်. မှင်-ဂျက်ပုံနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အဖြူရောင်ကဒ်ဓာတ်ပုံကိုပုံနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်, အမြန်ခြောက်သွေ့, ပျေါလှငျ, ရေစိုခံ, wear-ခုခံ, တိုက်ရိုက်ပြည့်စုံကိုအသုံးပြုပုံနှိပ်, ဆို Post-အပြောင်းအလဲနဲ့ features တွေမပါဘဲ, လျှောက်လွှာကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်.
တိုက်ရိုက် inkjet ပုံနှိပ်အဖြူကဒ်သံလိုက်ချွတ် encapsulation တွေကိုသေချာ RFID ချစ်ပ် paste နိုင်ပါတယ်:
ဘုံအနိမျ့သံလိုက်ချွတ် (Loco): 300 oe
optional ကိုသံလိုက်ချွတ်အရောင်: အနက်ရောင်, ညိုသော, အနီေရာင်, စသည်တို့ကို.
2, ID ကိုကဒ်အမျိုးအစားများ: EM4100, EM4102, TK4100, TK4102, စသည်တို့ကို.
3, ချိတ်ဆက်မှု IC ကဒ်, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, FM11F08, Mifare Ultralight, TI, ငါ-ကုတ်-2, etc.
4, ဆက်သွယ်ရန် IC ကဒ်အမျိုးအစားများ: SLE4442, SLE4428, SLE5542, SLE5528, etc.
1, ရိုးရှင်းပြီးကဒ်လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ရုပ်ရှင်မပါဘဲ, ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့်လမိုင်းမပါဘဲ
2, ကဒ်ပျေါလှငျ, ရေစိုခံ, image ကို flush, daub, နှစ်မြှုပ် (1-2 နာရီ), image ကိုမပြောင်းလဲဖြစ်နေဆဲ
3, inkjet မှင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်သင့်လျော်သော, လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သည်
4, image ကိုအရောင်နိုင်စွမ်း restore, high resolution ကတော့, ပုံနှိပ်တိကျမှန်ကန်မှု 5760dpi ထက်ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
6, ခရမ်းလွန်ခုခံ, ခုခံဝတ်ဆင်, မှိန်တားဆီး, ရှည်လျားသောကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ
7, ကဒ်လျှောက်လွှာအကွာအဝေးလုပ်ဖို့အမြန်, ချက်ချင်းစာရွက်စာတမ်းများအောင်များအတွက်သင့်လျော်သော, ကဒ်လုပ်ဖို့အဆုံးအသုံးပြုသူ; သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၏အသေးစားထုတ်လုပ်မှု,ကဒ်ကျောင်းသားကဒ်, ကုမ္ပဏီကဒ်, စသည်တို့ကို, တိုက်ရိုက်ပုံရိပ်တွေနှင့်စာသားသတင်းအချက်အလက်များကိုပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်
8, လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများဖြစ်စဉ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ, solvent-အခမဲ့, ထုတ်လွှတ်-အခမဲ့အိပ်ဇော,စသည်တို့ကို.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် Inkjet ပရင်တာတိုက်ရိုက် Print ကို PVC အဖြူရောင်ကဒ်အတွက်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အသံလိုက်မြှောင်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ RFID Chip Blank ကကဒ်
prev: ပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ CR80 PVC Card ကို, ပရင့်ထုတ်ရန်အ CR90 ပလတ်စတစ်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ CR100 ပလတ်စတစ်ကဒ်